शुक्रबार, असोज ३०, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ : नेपाली बजारमा आज शुक्रबार सुनको भाउ सामान्य बढेको छ । बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला चार सय रुपैयाँले बढेर ९४ हजार नौं सय कायम भएको छ । बिहीबार यसको भाउ प्रतितोला ९४ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको थियो ।
यस्तै तेजावी सुनेको भाउ पनि प्रतितोला चार सयले नै बढेर प्रतितोला ९४ हजार चार सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
बिहीबार यसको भाउ प्रतितोला ९४ हजार रुपैयाँ थियो । यता चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ । चाँदी शुक्रबार एक हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
‘बुढी गण्डकी आयोजनामा अर्बौ भ्र’ष्टाचा’र भएको’ भन्ने डा. बावुराम भट्टराइको अभिब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन गर्दै भट्टराईको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल प्रहरीको ६५ औं प्रहरी दिवस समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गलत सूचना दिएर जनता न’भड्काउन आग्रह गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
‘एउटा निर्णय नभएको, कसैले नलिएको, कार्यआरम्भ नभएको त्यो हुन्छ या हुँदैन । कसले गर्छ भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोसमेत सुनेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस्ता गै’रजिम्मेवार र नि’राधार अभिव्यक्ति एउटा कुरा हो । हामी त्यस्तो गै’रजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुन सक्दैनौं ।’
‘देश र जनतालाई ग’लत सूचना दिएर भ’ड्काएर गलत बाटोमा लाने कु’चेष्टा, त्यस्ता ह’र्कत हामी गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामी सत्य निष्ठा र जिम्मेवारी भावका साथ मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौं ।’
गृह जिल्ला गोरखा पुगेर एक कार्यक्रममा डा. भट्टराईले बूढीगण्डकी आयोजनामा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ९ अर्ब बाँडेर क’मिसन खाएको आ’रोप लगाएका थिए ।
डा. भट्टराईले बूढीगण्डकी परियोजनाबारे उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानविनको माग गरेका छन् । पछिल्ला सरकारले कमिसन खो’रहरूको संलग्नतामा ब’दना’म विदेशी कम्पनीलाई परियोजना दिएको र अहिलेसम्म अलपत्र रहेको भन्दै डा. भट्टराईले छानविनको माग गरेका हुन् ।